သူတို့ တစ်တွေ လာခြေပြီ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သူတို့ တစ်တွေ လာခြေပြီ..
သူတို့ တစ်တွေ လာခြေပြီ..
Posted by ကထူးဆန္း on Mar 13, 2013 in Copy/Paste, Myanma News | 25 comments
Hilton to enter Myanmar with namesake brand
By Ann Bagel Storck on 3/6/2013
Hilton Worldwide announced on Wednesday that it is set to to enter Myanmar with its Hilton Hotels & Resorts brand.
Hilton Worldwide, McLean, Virginia, signed an agreement with LP Holding Co. Ltd to manage Hilton Yangon in Kyauktada Township, Yangon, Myanmar. The 300-room hotel will be the first Hilton Worldwide property in Myanmar when it opens in 2014.
The new Hilton Hotels & Resorts property will be part of the Centrepoint Towers mixed-use development (pictured above) in Yangon.
Hilton Yangon will offer one all-day dining restaurant, two specialty restaurants,adestination sky bar,alobby lounge, approximately 15,000 sq ft (1,400 sq m) of event space,afitness center,apool,aspa and car park facilities. It is part of Centrepoint Towers,amixed-use development which includes high-end retail and an office tower. The hotel is located opposite Yangon’s High Court building and Independence Monument Park.
“Following the social and economic reforms the country has made over the past year, Myanmar has seen visitor arrivals grow by 45.1% compared to the previous year. Yangon in particular is positioned to grow much faster than many other emerging markets in Asia,” said Andrew Clough, senior vice president, development, Middle East & Asia Pacific, Hilton Worldwide. “Backed byastrong partner like LP Holding Co. Ltd, we are very confident that as the first internationally branded hotel in Yangon, Hilton Yangon will set the benchmark for quality hospitality experiences catering to both domestic and international travelers.”
“We are excited to announce the signing of three new hotels in Myanmar — the first of which will open this year — marking Accor’s return to Myanmar,” said Michael Issenberg, chairman and chief operating Officer for Accor Asia-Pacific. “Southeast Asia has long beenafocus market for Accor, and as the country’s tourism industry develops, we see significant growth potential for international hotel operators with long-term experience in the region. These three developments represent yet another step towards our goal of operating 700 hotels in Asia Pacific by 2015.”
Accor, Courcouronnes, France, said the 168-room MGallery hotel in central Naypyidaw, Myanmar’s capital city, will be the city’s first international brand hotel. The hotel will feature one meeting hall, four meeting rooms,acigar bar and two dining outlets, including an Italian restaurant.
An artistic rendering of the Pyay Tower development in Yangon, which will include the 366-room Novotel Yangon Max.
The other two hotels are in Yangon. These include the 366-room Novotel Yangon Max, which is to be completed by the end of 2013. The hotel will include three restaurants, includingarooftop French restaurant,abar,a1,000 sq m (10,763 sq ft) banquet room, eight meeting rooms,aswimming pool and wellness center. The 280-room Novotel Mandalay Mingalar is scheduled to open in 2015. The hotel will include two restaurants, two bars,aballroom, four meeting rooms,aswimming pool, and wellness center.
“With Myanmar expectingastrong increase in international arrivals this year, we look forward to beingapart of the development of the country’s tourism infrastructure,” said Robert Murray, chief operating officer, Accor South East and North East Asia.
source ; http://www.hotelsmag.com/Industry/News/Details/40429
ဟိုတယ် တွေ လာ ဆောက် ကြတော့ မယ် ။ဆောက် နေပြီ ဆိုတော့ ကဲ ကဲ မြန်မာ ဟိုတယ် ပိုင်ရှင်တွေ ဆန္ဒ ပြလိုက်ကြရအောင် …. အဟိ။
အနည်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးမှာ လုပ်သားထောင်ချီ အလုပ်ရမယ် ။ ဆောက်ပြီးသွားတဲ့ အခါ ဟိုတယ်မှာ ဝန်ထမ်း အကြမ်းဖျင်း တစ်ထောင် ကျော် အလုပ်ရမယ် ။ သူ့တို့ ကို supprot လုပ်ရမဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ဝင်ငွေတိုးမယ် ။ အလုပ်အကိုင် တွေ ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကထူးဆန်းက တော့ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါကြောင်း …
ဟိုတယ်တွေ တိုးလာတာနဲ့အမျှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Tourism ကိုလည်း substainable ဖြစ်အောင် အဘက်ဘက်မှ တိုးတက်စေချင်ကြောင်း..
လေးလေးထူးဆန်းပြောသလို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါကြောင်း…
အဲ့ ဟိုလတယ် မန့်နေမန့်ကရော ဘယ်လိုကိုင်မတုန်းမသိ။
မိန်း မန့်နေမန့်က အုပ်စုခွဲ လွှတ်လိုက်မှာလား။
များသော အားဖြင့် .. မန့်နေမန့် က နိုင်ငံခြားသားများလာတာပေါ့ .. အထူးသဖြင့် ဂျာကြီး နဲ့ ဖိုင်နစ်ရှယ် ကွန်ထိုလာ ပေါ့ ။ ချက်ကြီး တို့လည်း နိုင်ငံခြားသားများပါတယ် ။ ကျန်တာတွေတော့ မြန်မာရ ရင် မြန်မာပေါ့ ။ မရတော့လဲ နိုင်ငံခြားသားပေါ့ ။
နောက်တော့လဲ မြန်မာတွေ အစားဝင်ပေါ့ ။
ဆိုတော့ ခိုင်ဇာ တို့လို နိုင်ငံခြား အတွေ့ အကြုံရှိသူများ လုပ်ငန်းနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိရင် နိုင်ငံခြားပေး နဲ့ မြန်မာပြည် လာ အလုပ်လုပ်လို့ ရအောင် အခုထဲ က အဲ့ဒီ့ ဟိုတယ်အုပ်စုတွေ မှာ အလုပ်လျှောက်လို့ ဝင်ထားပေါ့ … သူတို့ web site မှာ ဝင်ကြည့်ထားပြီး အလုပ်လျှောက်လျှင်လဲ ရမည် ထင်ကြောင်းပါ ။မြန်မာပြည် ပြန်လာချင်သည် ဆိုလျှင်ပေါ့ နော ်…..
အဲ့ဒီ ဟိုတယ် မန့်နေမန့်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားမိလို့မေးမိတာပါ။
အနော် စိတ်ဆတ်ပုံမျိုးနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။
မဆက်လည်း မဆက်စပ်ပါဘူး။ ။
သူငယ်ချင်းကို အသိပေးလိုက်မယ်. သူက အိမ်ပြန်ချင်နေတာ..Hotel Experience လည်း သူ ့မှာရှိတယ်. ကျေးဇူးပါ ကိုကထူးဆန်း.
ဟော်တယ် ဆိုလို့ …ဟိုသာထိန်းကြီး အဟွာပျက်ကျပြီးကတည်းက
skii resort လုပ်မယ့် အဲ့မှာ ဟော်တယ် ဆောက်မယ့် ကိစ္စလေး
သွားအမှတ်ရတယ်..အစီအစဉ် ပျက်သွားပလား မသိပူးနော်..။
ခု ဝင်တာတွေက ဘစ်ဇနက် အချက်အခြာ နေရာတွေ (ဘစ်ဇနက်ဟော်တယ်တွေ) မို့..
နောက်ထပ် ဒုတိယ လှိုင်းအနေနဲ့ Resort ဟော်တယ်တွေ ဝင်လာနိုင်သေးတယ်
ဂလိုပဲ မြေဦးထား ပြန်ရောင်းစား နဲ့ပဲ သွားကြတော့မလား
ကျွန်တော်တို. အင်တာနေရှင်နယ်တောက်တိုမယ်ရလေးတွေလဲ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှိမယ်ထင်တယ်နော်…
ဟိုတယ်မှာဆို အင်တာနက်တွေ၊ကန်ပျူတာဒွေ သုံးရမှာပဲနော…….
ကိုရွှေတိုက်တို့လို အင်တာမဲ ကန်ပျူူူတာ သမားတွေက တော့ဘယ်သူ လာလာ စင်ပေါကပါ.. ခုံခု စရာမလိုပါ.. :hee:
အရီးလတ် ..ချိတ်မချိုး နဲ့နော် ။တွေ့မိသလောက် သိပ် မပြည့်စုံဘဲ ဈေးက တော့ မသေးသလိုဘဲ ..
အန်တီမမရဲ့ .. ကိုယ့်လမ်း နဲ့ ကိုယ်လေ .. ဆင်ကြီးကလည်း ဆင်ကြီးလမ်း သွားလိမ့်မပေါ့ ။ ပုရွက်ဆိတ်ကလည်း ပုရွက်ဆိတ်လမ်း သွားမှာပေါ့ ..
အန်တီပဒုမ္မာရေ..ကိုဇော်ဇော် အဆောက်အဦးကလည်း အတော်လေး တွန်းဆောက်လာတာ တွေ့မိပါရဲ့။ မြို့လယ် က ထီးထီးကြီးလည်း လှုပ်ရှားမှု့တွေ တွေ့မိတော့ O.K မယ် မျှော်လင့် မိပါရဲ့ ( လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်ထက် ပိုမြင့်နေတယ် ၊ ဆူးလေ ဘုရား အထက် ဟိုတယ် ခန်း ခွင့်ပြုမှာလား တော့ မလုပ်ကြဘူး ထင်ပါရဲ့ .. ဟိဟိ)
ဟိုတယ် မန်းနေ့ချ်မန့် သင်ဒန်း တက်မယ် …
ဟိုတယ်တွေ ဆောက်ပီးဒဲ့အခါ မန်နေဂျာ တွားလုပ်မယ် ….
နာ့ကို မခန့်ဒဲ့ ဟိုတယ်ကို တစ်ပွေတည်း ဆန္ဒ ပြပလိုက်မယ် …
လောလောဆယ် သင်ဒန်းတက်ဖို့ ပိုက်ပိုက် စုလိုက်အုံးမယ် … ငွင်း ငွင်းး
မြန်မာဖြစ် Hotel Management Software တွေ ကိုလဲ အားပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါဦး။ :hee:
မန်းဂဇက်အတွက်.. Magazine, Journal Management Software လေးလိုချင်တာ…
ဘာ function တွေသုံးချင်တာတုန်း သဂျီး …။
基本設計　နဲ့ システムテストလောက်တော့ ကူနိုင်ပါဂျောင်းးးးး။
နာ တို့ မသိအောင် ဘူးသီးငါးပေါင်းကြော်နဲ့ ရေးသွားတယ်။
ဒါမဲ့ ဘာပြောလဲ နာ သိဒယ်ရယ်။
နောက်ရက် သိချင်တာ လှမ်းမေးမယ်နော် ဆြာဂီ…
Phreedom သုံးမယ်ဆိုပြီး.. ဆာဗာထဲအင်စတောလုပ်ထားပြီး.. ပျင်းနေတယ်..။
မြန်မာပြည်က.. စူပါဂျာနယ်တွေဘာသုံးသလည်းမေးကြည့်တော့.. လက်တွေ့ကျကျ.. လက်နဲ့များတယ်တဲ့လေ..
Magazine Manager ကို ဖတ်ကြည့်နေပါသည်။
– Production Mgmt
– Circulation Mgmt
ဆိုပြီး module ၄ခု တွေ့ပါရဲ့..။
ခက်တာက အဲ့ဒါကြီး ဝယ်သုံးရင်တောင် ၁၀၀% suit ဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘူးပဲ..။
MG က စီးပွားဖြစ်ထုတ်ရောင်းတဲ့ မဂ္ဂဇင်း မဟုတ်သလို Web Content နဲ့
Printed Content ဆက်နွယ်မှုလည်း မရှိတာကြောင့်ပါပဲ..။
(သဂျီး ရေးတဲ့ ပိုစ့် အနည်းငယ်မှ လွဲလို့)
လိုချင်တဲ့ 機能一覧ချရေးပြီး Local Freelancer တွေဆီ 見積 တောင်းကြည့်ပေါ့သဂျီးရယ်..။
ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်လွန်းရင်တောင် (လိုကယ်ကဆြာများပါ) RDBMS လေးသုံးကြပါဗျာ..
MS Access လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့…
ဟိုတယ်ကြီးကြပ်ရေးဆော့ဝဲ.. ACE ကိုအပ်တာတဲ့..
သိန်း၅ဝကုန်ပြီး.. အယ်ရာချည်းတက်နေလို့.. ထိုင်းကဆော့ဝဲဝယ်သုံးလိုက်ရတယ်တဲ့..
ယူအက်စ်ကနေ.. မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကဟိုတယ်တွေ ဘွတ်ခ်လုပ်ပေးတဲ့..
အာ.. ဘိုင်နိမ်းဂျီးနဲ့ မဆော်နဲ့လေဂျာ ..
တူရို့အမျိုးဒွေ ပေါပါသဘိနဲ့ သများ ကျက်သီးထဒယ်…
ဒီလိုမှတ်ချက်မျိုး ကို သက်ဆိုင်သူတွေ တကယ်ဘဲ ကြားသင့်ပါတယ်။
Customer တွေ ဆီက ကျေနပ်မှုမရတာတွေ၊ ပြသနာဖြစ်တာတွေကို မကြားချင်ယောင်ဆောင်ထား လို့ မရပါဘူး။
အဲဒါကို သိမှ၊ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားမှ ကမ္ဘာမှာ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မဲ့ Software House ဖြစ်မှာပါ။
သက်ဆိုင်သူများ သဘောထားကြီးသော နားဖြင့် နားထောင်ပြီး မြင့်မားသော ပညာအသိနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ပါစေ။
ပလိုဂလမ်မာ ဒွေ ဘစ်ဇနက်လော့ဂျစ်ကို ဖတ်ကြပါ
ဘစ်ဇနက် မော်ဒယ် ပလန်နာ ဒွေ တက္ကနော်လော်ဂျီ ဖတ်ကြပါ။
အက်ဒမင် အိပ်ချ်အာရ် နဲ့ မားကတ္တာ ဒွေ အထက်က၂ခုကို
ဒီဇိုင်နာတွေ လှတာနဲ့ သုံးရလွယ်တာကို မျှခြေချနိုင်ကြပါဇီ။
ဆေးလ်စ်တွေ အပြောနဲ့ ဈေးနဲ့ အထက်က နည်းပညာပိုင်း ခက်ခဲမှု
လစ်မစ်နဲ့ အခြေအနေတွေကို ချိန်ခွင်လျှာချနိုင်ပါဇီ။
အိပ်ချ်အာရ်တွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ် စနစ် ကိုလေ့လာနားလည်သဘောပေါက်ပီး
အကိုက်ညီဆုံး လူ့စွမ်းအားရင်းမြစ်တွေကို ဆပ္ပလိုင်း လုပ်ပေးနိုင်ဂျဘာဇီ။
သည်တော့ ကောက်ချက်ချ …ကိုယ့်အပိုင်းလေးကိုယ် ကွက်ကွက်ကလေး သိယုံနဲ့တော့
လုံလောက်တဲ့ ခေတ် မဟုတ်တော့။
P.S: A failure isabest case study.
အဲလို ဟိုတယ်ကြီးတွေ ဝင်လာရင်…
အသေးလေးတွေ အခြေအနေဘယ်လို ဖြစ်နိုင်မလဲ မသိဘူး။
ဒါ့ထက် ဒီပိုစ့်မှာ fb like မတွေ့မိဘူး။
ဦးသိန်းစိန် ဥရောပ ခရီးသွားနေတုန်း ၊ အမေရိကန်ကုမ်ပဏီကြီးတွေ ဝင်လာပြီတဲ့
ဒါပေသည့် ၊ နားစွန်နားဖျား ကြားခဲ့တာပေါ့နော်
ဘယ်နေရာမှာ ဘာဖြစ်မယ်လို ့ရွယ်ပြီးသား ဆိုလားပဲ
ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကြားခဲ့ရတဲ့ သူများတွေ ပြောခဲ့တဲ့ ဟာတွေပေါ့
ပုစင်းရင်ကွဲတွေ အော်နေကြတယ် အော်နေကြတယ် xxxxx ကြားတော့ကြားတယ် မမြင်နိုင်တယ် ……….. သီချင်း ရှိုဒါနော် ပြင်းလို့ :hee:
ဟိုတယ်တွေများ အနားတောင် ကပ်နိုင်ပါဖူးကွယ်…
မေးလိုက်ရင် ဈေးတွေက လန်ထွက်နေတယ်….
နိုင်ငံကြီးက တိုးတက်တော့ လာပါရဲ့…..
ဆင်းရဲတဲ့ကောင်တွေ နင်းပြားဖြစ်… ချမ်းသာတဲ့ကောင်တွေ ပိုချမ်းသာ…..
အစိုးရကလည်း သာတူမျှပေးထက် ကိုယ့်ဘာသာတောင် အနိုင်နိုင်……
ွှTourism နဲ့ပတ်သက်နေတာလေးတွေ ကြုံရာမှာဝင်မန့်လိုက်ပါတယ်။
၁. Telephone Numbers. ပြီးခဲ့တဲ့လက မုံရွာကို အသွား မန်းလေးကားဝင်းကနေစပြီး မုံရွာရောက်တဲ့အထိ Tourist တယောက်ကိုကူညီပေးခဲ့ရတယ်။ သူကပြောတယ် Hotel Booking လုပ်ဘို့ဖုန်းခေါ်တာ ဘယ်လိုမှခေါ်လို့မရခဲ့ဘူးတဲ့။ သူတို့တွေကိုင်ထားတဲ့ Guide Book မှာ မုံရွာက ဟိုတယ်တွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေပါပါတယ်။ မပါတာက Area Code လို့ခေါ်တဲံ ရှေ့နံပါတ် ( မုံရွာဆို ဝ၇၁– ).